आयो गज्जबको स्मार्टफोन, एकपटक चार्ज गरेपछि ९४ दिनसम्म ब्याट्री टिक्ने ! - Disanirdesh
आयो गज्जबको स्मार्टफोन, एकपटक चार्ज गरेपछि ९४ दिनसम्म ब्याट्री टिक्ने !
दिशा निर्देश २१ जेष्ठ २०७९, शनिबार ०८:१४ मा प्रकाशित (३ हफ्ता अघि)
काठमाडौं – बजारमा एक पछि अर्को अत्याधुनिक स्मार्टफोन आएसँगै ब्याट्रीको चार्ज नटिक्ने समस्या पनि बढ्दै गएको छ ।
स्मार्टफोन जति धेरै ठूलो तथा बढि फिचर्सयुक्त भयो ब्याट्रीको खपत पनि उति नै बढि हुन्छ । यस्तोमा कम्पनीहरुले उच्च ब्याट्री क्षमतायुक्त फोनहरु बजारमा ल्याइरहेका छन् ।
अहिलेसम्म बजारमा ७ हजार मिलिएम्पियर आवर क्षमताको ब्याट्री भएका केही स्मार्टफोन बजारमा देखिएका छन् ।
कतिपय स्मार्टफोनमा १० हजार मिलीएम्पियर आवरको ब्याट्री पनि रहेका छन् । तर यी सबै किर्तिमानलाई पछि पार्दै चीनको एक कम्पनीले २१ ह्जार मिलिएम्पियर आवर क्षमताको ब्याट्री भएको स्मार्टफोन बजारमा ल्याएको छ ।
चिनिया ब्राण्ड Oukitel ले WP19 नामक स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । यो स्मार्टफोनमा २१ हजार मिलिएम्पियर आवर क्षमताको ब्याट्री रहेको छ ।
यो फोन एकपटक फुलचार्ज गरिसकेपछि केही हप्तासम्म तपाइँले चार्जरको सम्झना नगरेपनि हुन्छ ।
यो स्मार्टफोनमा एक पटक पूरा चार्ज गरेपछि १ सय २२ घण्टासम्म लगातार फोन कल गर्न सकिन्छ । साथै एक पटक फुलचार्ज गरेको ब्याट्रीले १ सय २३ घण्टासम्म गीत बजाउन सकिन्छ भने ३६ घण्टासम्म लगातार भिडियो चलाउन सकिन्छ ।
त्यस्तै एकपटक एकपटक फोन चार्ज गरेपछि यो स्मार्टफोन खुल्ला राख्दा ९४ दिन अर्थात् २२ सय ५२ घण्टासम्म यसको चार्ज टिक्दछ ।
तर यो फोनमा ठूलो ब्याट्री हुनुको घाटा पनि छ । यो फोन पूरा चार्ज हुनका लागि ४ घण्टा लाग्दछ । यसमा २७ वाटको फास्ट चार्जिङ रहेको छ । यो फोनलाई निकै विषम परिस्थितिमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
Wp19 स्मार्टफोन वाटरप्रुफ रहेको छ । यसमा ६.७८ इन्चको डिस्प्ले राखिएको छ जसमा फुल एचडी प्लस रिजोलुसन तथा ९० हर्ज रिफ्रेस रेट रहेको छ । यसमा मिडियाटेक हिलियो G95 प्रोसेसर राखिएको छ । फोनमा ८ जिबीको र्याम र २५६जिबीको इन्टरनल स्टोरेज दिइएको छ ।
पछाडिको भागमा ट्रिपल क्यामरा सेटअप रहेको छ । जसमा मूख्य क्यामरा ६४ मेगापिक्सेल छ । त्यस्तै २ मेगापिक्सेलको म्याक्रो क्यामरा र २० मेगापिक्सेलको सोनी नाइट भिजन आइआर मोड्युल रहेको छ । त्यस्तै १६ मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामरा रहेको छ ।
यो फोनमा एन्ड्रोइन १२ अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ । युरोपमा यो फोनको मूल्य ६सय ९४ युरो तोकिएको छ ।